समाचार – Paluwa Khabar
सिन्धुपाल्चोक – ‘मेरो श्रीमतीलाई तपाईँ देख्नुभयो कि ?’ साँगाचोकगढी नगरपालिका ४ का ४२ वर्षीय गोविन्द श्रेष्ठ विदेशबाट फर्कने जो कोहीलाई पनि यही प्रश्न सोध्नुहुन्छ । तर जवाफ आजसम्म कतैबाट पनि भेट्नुभएको छैन । विदेश जाने हर कोहीलाई सोध्नुको अर्को का'रण पनि छ । गोविन्दलाई श्रीमती रोजगारीका लागि कुन चाहिँ देश गइन भन्नेसमेत जानकारी छैन । किनकि उहाँकी श्रीमती रीना घर सल्लाहमा विदेश जानुभएकाे हैन । कहाँ छु भनेर वास्तविक कुरा रीनाले पनि बताउनुभ'एन । ६ वर्षअघि बेली श्रेष्ठ बालबच्चा श्रीमानको साथमा छाडेर काठमाण्डौ हिँड्नुभएको थियो । तर ६ वर्ष बित्दा पनि कुनै ख'बर आएको छैन । २०७२ साल पुसमा बेली काठमाण्डौ जान्छु भनेर घरबाट हिँड्नुभएको थियो । बेली घर छाडेर हिँड्दा चार जना बालबच्चा सानै थिए । काठमाण्डौ हिँड्नुभएकी बेली कुवेत पुगिछन् भन्ने हल्ला पनि श्रीमान् गोविन्दले निकै पछि मात्र थाहा पाउनुभ
गुल्मी । दुई दिनदेखिको लगातार अविरल व'र्षाका कार'ण गुल्मीमा खो'लाले जि'प बगा'एको छ ।सोमबार बिहान बुटवलबाट गुल्मीको वामीटक्सारतर्फ आउँदै गरेको लु१ज ३४३२ नम्बरको यात्रुवाह'क जि'प खोला तर्ने क्र'ममा बगाएको हो । गुल्मीको सत्यवती गाउँपालिका–६ अन्तर्गत डहरे खो'लाले अपराह्न दिउँसो २ः३० बजेको समयमा बगा'एको जिल्ला प्रहरी कार्यालय गुल्मीले जनाएको छ । खोला तर्ने क्रममा खो'लाको बीच भागमा पुगेर अचान'क जिप रोकिएपछि यात्रुहरु त'त्कालै जिपबाट झरेका थिए । जिपमा स'वार नौ जना यात्रु भने सुरक्षित रहेको प्रहरीले जनाएको छ । यात्रु झरे'लगत्तै ठा'डो खो'लामा माथिबाट आएको पानीको ब'हावले जिपलाई बगाएर बढीघा'ट खोलामा पु¥याई बेपत्ता बनाएको सत्यवती गाउँपालिकाका अध्यक्ष पारिश्वर ढकालले जानकारी दिइका छन् । घटनाको जानकारी पाएपछि इलाका प्रहरी कार्यालय जोहाङबाट प्रहरी टोली घ'टना स्थलमा पुगेको थियो । खो'लाले ब'गाए
बा’ढी पी’डितलाई तत्काल राहत प्याकेज घो’षणा गर्न एमालेको माग
प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा (एमाले) ले दुई दिन देखिको अविरल व'र्षाका का'रण देशका विभिन्न भागमा जनधनको ठु-लो क्ष'ति भएको भन्दै तत्का'ल राहत प्याकेज घोष'णा गर्न सरकारसँग माग गरेको छ । मंगलबार एमालेका प्रवक्ता प्रदीपकुमार ज्ञवालीले विज्ञप्ति जारी गर्दै व'र्षाका कार'ण भित्र्याउन बेलाको धानबाली सखा'प हुँदा अ'सह्य पी'डामा परेका किसान परिवारलाई सम्बोधन गरी तुरुन्त राह'त प्याकेज घोषणा गर्न सरकारसँग । माग गरेका हुन्व'र्षाका का'रण भित्र्याउन ठिक्क परेको धानबाली सखा'प हुँदा अस'ह्य पी'डामा परेका किसान परिवारलाई सम्बोधन गरी तुरुन्त राह'त प्याकेज घोषणा गर्न सरकारसँग माग गर्दछ’, एमालेले भनेको छ । साथै अव'रुद्ध यातायातलगायत सेवाहरू तत्का'ल सञ्चालन गर्न, बा'ढीमा फसे'का व्यक्तिहरु र संक'टमा परेका पर्यटकहरुको तत्का'ल उद्धा'र गर्न ध्यानाकर्षण गराउँदै मौसम पूर्वानुमानको प्रभावकारी व्यवस्था गर्न, किसा
सामान किन्ने भिड जम्मा भएको पसलमा जमिन भा’सियो, एक दर्जन मानिस दलदलमा परे (भिडियो हेर्नुस्)
काठमाडौ । सामाजिक सञ्जामा एउटा भिडियो सार्वजनिक भएको छ । यो भिडियो भारत उत्तर प्रदेशको आजमगढ जिल्लाको हो । जसमा एउटा पसल ग्राहकहरुको भी'डले भरिएको थियो र अचा'नक जमिन भासि'यो । १० देखि १५ फिटको ठूलो खाड'ल एक दलदलमा परिणत भयो। एक्कासि सो क्षेत्रमा ह'ल्ला चलेको थियो। उनी आफ्नो ठाउँबाट भा'गे र आफूलाई बचा'उन थाले। यस्तो अवस्थामा १० देखि १२ जना दलदलमा परे । भग्नावशेषमा पुरिएका मानिसहरुलाई पनि उद्धार गरिएको थियो। सिसिटिभी मा पूरै घट'ना को भिडियो रेकर्ड भएको छ। यस घटना पछि, नगरपालिका र स्थानीय प्रशासन मा स्थानीय जनता को आ क्रो श भरीरहेको छ। यो घटना हरबंशपुर क्षेत्र को चौराहा मा भएको थियो, जसमा जमिन अचा'नक एक दलदलमा परिणत हुन्छ र दर्जनौं मानिसहरु यसमा पर्छन ।यस घट'ना को बारेमा जनताहरु बिच विभिन्न प्रकारका छलफलहरु भैरहेका छन्। लामो समय देखि, भारी वर्षा र नाली को सफाई नभएको का'रण, त्यह
नाच हेर्ने क्र’ममा केही युवकबीच झ’गडा पछि इना’रभित्र भेटियो एक युवकको श’व!
Posted in main-news, समाचार
सिरहामा इनारभित्र एक युवक मृ,त फेला परेका छन् । जिल्लाको नरहा गाउँपालिका ३ स्थित इनारमा गोलबजार नगरपालिका ८ बस्ने २० वर्षीय श'त्रु'धन महतो शनिबार बिहान मृ'त अवस्थामा फेला परेको प्र'हरीले जनाएको छ । महतोलाई इनारमा डु'बेको अवस्थामा देखेपछि स्थानीयले प्रहरीलाई खब'र गरेका थिए । घ,टनास्थलमा पुगेको प्र'हरी टोलीले युवकको श,व निकालेर पो'ष्टमार्ट'मका लागि पठाउने तयारी गरेको इलाका प्रह'री कार्यालय । मिर्चैयाका प्र'हरी निरीक्षक अवधकिशोर ओझाले जानकारी दिए ।स्थानीयका अनुसार युवक नर'हामै आयोजित झिझिया नाच हेर्न शुक्रबार राति गएका थिए । नाच हेर्ने क्रममा केही युवकबीच झ'गडा भएको थियो । कसरि यस्तो भयो भन्नेबारे अझै पत्ता लगाउन ,झ'गडा र महतोको मृ,त्युको सम्बन्धमा अनुसन्धान भइरहेको प्रह'रीले जनाएको छ ।****** यो समाचार को पुरा भिडियो हेर्न यहाँ तल क्लिक गर्नुहोला ****** सिरहामा इनारभित्र एक युवक
नेपाल प्रहरीले ठूलो संख्यामा कर्मचारीको माग गरेको छ । शुक्रबार एक सूचना जारी गर्दै प्रधान कार्यालयले कर्मचारी मागेको हो । सूचनाअनुसार जनपद समूहतर्फ प्रहरी सहायक निरीक्षक र प्राविधिक समूहअन्तर्गत विभिन्न उपसमूहतर्फ प्राविधिक प्रहरी जवान पदहरूमा गोग्य उम्मेद्वारहरुले आवेदन दिन सक्नेछन् । प्रसनिका लागि ३६७ जना माग भएको छ । प्राविधिक प्रहरी जवानतर्फ २२८ जनाको माग भएको छ। प्रसनिका लागि तीन सय र प्रहरी जवानलाई एक सय ५० दस्तुर लाग्नेछ। दरखास्त कात्तिक ३ गतेदेखि मंसिर १२ गतेभित्र दिइसक्नुपर्ने हेडक्वाटरले जनाएको छ।****** यो समाचार को पुरा हेर्न यहाँ तल क्लिक गर्नुहोला योपनि काठमाडौँ ।नेपाली राष्ट्रिय फुटबल टोलीका प्रशिक्षक अब्दुल्लाह अलमुताइरीले आज भारतविरुद्ध हुने साफ च्याम्पियनसिप २०२१ को फाइनल प्रशिक्षको टचलाइनमा उपस्थित हुन नपाउने भएका हुन् । पाएको भन्दै साफले प्रशिक्षक
बागलुङ कालिका भगवतीबारे रोचक किम्बदन्ती र बिशेषता ,अवश्य हेरौ ।
कालिका भगवती एक शिद्ध शक्तिपीठ हो । यहाँ छिमेकी मुलुक भारतबाट पनि हजारौँ दर्शनार्थी आउने गर्दछन् । हिन्दू धर्ममा कालिका भगवतीको महत्वूर्ण स्थान छ । शक्ति प्राप्तिका लागि कालिका भगवतीको पूजा आराधना गर्ने विश्वास गरिन्छ । कालिका भगवतीप्रति विश्वास राखेर पूजा पाठ गर्नाले उनी प्रसन्न हुन्छिन् र फल प्राप्ति हुन्छ भन्ने किंवदन्ती रहँदै आएको छ । कहिले र कसरी भएको थियो मन्दिरको निर्माण ? पर्वतका राजा प्रतापी नारायण मल्लले वि.सं. १५९० मा राज्यरोहण गरेका थिए । उनको विवाह १५९१ मा पाल्पाका राजा मणि मुकुन्दसेनकी छोरीसँग भयो । विवाह हुँदा छोरीले माझकी देवीलाई पनि दाइजोको रुपमा बुबासँग मागेर आफूसँगै ल्याएकी थिइन् । पाल्पाबाट पर्वत ल्याउने क्रममा देवीको डोली हाल मन्दिर भएको ठाउँमा बिसाएर उठाउँदा नउठेपछि राजदम्पत्तीले यस ठाउँमा मन्दिरको स्थापना गरी पूजापाठ गर्ने व्यवस्था मिलाएको किम्बदन्ती छ ।
वीरगन्ज : बाराको कोल्हवीमा कार र मोटरसाइकल ठोक्किदा दुईजनाको मृत्यु भएको छ । कार चालकसहित तीजना घाइते भएका छन् । कोल्हबी नगरपालिकामा पर्ने कोल्हबी तामागढी सडकखण्डमा बुधबार राति साढे ९ बजे दुर्घटना भएको हो । दुर्घटनामा मृत्यु हुनेमा मोटरसाइकल चालक बाराको कोल्हबी नगरपालिका २ का ३८ वर्षीय पेमा दोर्जे घिसिङ र मोटरसाइकलमा सवार त्यहि ठाँउका ४० वर्षीय डेनी स्याङताङबो रहेका छन्। तामागढीबाट कोल्हबीतिर गइरहेको बा ११ च ४५११ नम्बरको कारले विपरित दिशाबाट आइरहेको ना ५९ प १२७० नम्बरको मोटरसाइकलाई ठक्कर दिएको थियो । कारको ठक्करबाट मोटरसाइकलमा सवार घिसिङ र स्याङताङबो दुवैजनाको घटनास्थलमै मृत्यु भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाराका प्रहरी निरीक्षक सुरेन्द्र यादवले जानकारी दिए । घाइते हुनेहरुमा कारका चालक कोल्हबी २ का ४५ वर्षीय बद्री अधिकारी, कारमा सवार १८ वर्षीय रोहीत पण्डित र २५ वर्षीय विवेक चौधरी र
काठमाडौं । लामो समयको अन्तरालमा हिजो एउटा नयाँ नेपाली चलचित्र हलमा रिलिज भयो । दशैंको अवसरमा रिलिज गरिएको चलचित्रले दर्शकलाई हलमा फर्काउने आशा आम चलचित्रकर्मीले राखेका थिए । तर पहिलो गाँसमै ढुंगा झैं भएको छ ।शोभित बस्नेत निर्देशित चलचित्र ‘डाँडाको वरपिपल’ रिलिज भएको दोस्रो दिन सिभिल मलको क्यूएफएक्समा पुग्दा हलभित्र हेर्दा विरक्तलाग्दो दृष्य देखियो । सिंगै हलभित्र जम्माजम्मी ६ जना दर्शक थिए । ४ जना वयस्क र २ जना बालबालिका । हलबाट निस्कने बेला उनीहरुसँग कुरा गर्दा कोही पनि बोल्न तयार भएनन् ।लामो समयपछि रिलिज भएको नयाँ चलचित्र, त्यो पनि मल्टिस्टारर । भुवन केसी, शिव श्रेष्ठ, गौरी मल्लजस्ता लिजेन्डदेखि सलोन बस्नेत, रुबिना थापासम्मका नयाँ पुस्ताका प्रतिभाहरुले यसमा अभिनय गरेका छन् । दसैंको विदामा यो चलचित्रले राम्रै संख्यामा दर्शक तान्ने अपेक्षा गरिएको थियो । तर, दोस्रो दिनमै फिल्मको व्
खसी काट्ने बिबादमा बुवाले आफ्नै छोराको घाँटी का’टे
अष्टमी सुरु हुने राती बुवाले आफ्नै छोराको ह'त्या गरेका छन् । सल्यान बनगाड कुपिण्डे नगरपालिका–१० माझकाडामा ५५ वर्षीय बुवा निमबहादुर कुँवरले आफ्नै छोरा ३३ वर्षीय रुपलाल कुँवरको ह'त्या गरेका हुन् । दसैंमा काट्ने खसीको विषयलाई लिएर सामान्य घरायसी विवाद हुँदा करिब राति १० बजे तिर घरेलु हतियार हँ'सियाको प्रयोग गरेर छोराको ह'त्या गरेको प्रहरीले जनाएको छ । यस्तै, रोल्पामा भाइले दाइको घाँटी रेटी ह'त्या गरेका छन् । रोल्पा नगरपालिका–६ दार्बिट निवासी ४८ वर्षीय अमराज बुढाले आफ्नै दाइ ५६ वर्षीय पूर्णबहादुरको घाँटी रेटी ह'त्या गरेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय रोल्पाका कार्यालय प्रमुख प्रहरी नायब उपरीक्षक नरेशराज सुवेदीले बताए । “हत्या भएको ठाउँलाई सुरक्षित राखेका थियौँ, नेपालगञ्जबाट तालिम प्राप्त कुकुरले आफ्नो सही ट्र्याक नछोडी सर्कल बनाएर हत्या गर्ने व्यक्तिको घरभित्र छिरेर पत्ता लगायो”, सुवेदीले भने